कथा : योग्य जीवन - Safal Stories
Home Short Stories कथा : योग्य जीवन
एकजना बटुवाले नदीमा डुब्दै गरेको, अत्तालिएर चिच्याईरहेको केटो देख्यो । ऊ हामफालेर त्यहीं पुग्यो । र, डुब्दै गरेको केटोलाई किनारमा ल्यायो । कृतज्ञ बन्दै केटोले, बटुवालाई ” धन्यवाद” भन्यो।
बटुवाले सोध्यो, ” केको लागि धन्यवाद भन्यौ ?” केटोले भन्यो, ” मेरो ज्यान बचाइदिएर तपाईंले मलाई नयाँ जीवन दिनुभयो । मप्रति तपाईंले लगाउनुभएको यो गुनको लागि धन्यवाद भनेको हूँ ।”
केटोको आँखामा हेर्दै बटुवाले भन्यो, ” बाबु ! तिम्रो जीवन, साँच्चै, साँच्चै बचाउन योग्य थियो ? तिम्रो जीवन साँच्चै बचाउन योग्य थियो भन्ने कुरा तिमी जवान भएपछी सावित गर्नु ! त्यतिबेला मात्रै, तिमीलाई बंचाएकोमा म खुशी हुने बेला आउनेछ।”
यो ब्युँझने, सोंच्ने र सचेत बन्ने समय हो । हामीसंग जीवनको अर्थ हुन, यससंग उद्देश्य गाँसिनुपर्छ । जीवनमा कुनै उद्देश्य नहुँदा पैसा, शिक्षा र इज्जत भएर पनि जीवन खोक्रो भइराख्छ ।
Previousप्रसिद्ध व्यक्तिहरुका मायासंग सम्बन्धित भनाइहरु
Nextआफूलाई बचाएका व्यक्तिको सम्झनामा सामजिक काम, फेरियो जीवन हेर्ने दृष्टिकोण